20ka Apps ee Instagram ugu Wanaagsan ee Noocyada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/20ka Apps ee Instagram ugu Wanaagsan ee Noocyada
20ka Apps ee Instagram ugu Wanaagsan ee Noocyada
Haddii aad hore ugu isticmaalaysay Instagram-ka ganacsi, waxay u badan tahay inaad ka warqabto faa'iidooyinka aan la tirin karin ee ku jira adeegsiga aaladdan warbaahinta bulshada agab suuqgeyneed.
Haa, Instagram lafteedu waxay siisaa suuqgeynayaal badan oo waxtar leh. Laakiin marmarka qaarkood waxaad u baahan tahay caawimo yar oo dheeraad ah si aad wax u gaadhsiiso heerka xiga. Taasi waa halka ay apps-ka Instagram ka soo galaan.
Halkan, waxaan u soo uruurinay abka Instagram ugu fiican:
Sawireynta sawirada. Kuwani waa apps kaa caawinaya inaad wax ka beddesho, beddesho oo aad ku darto filtarrada sawiradaada.
Qaabeynta iyo qaabeynta. Barnaamijyadani waxay ka caawiyaan sumaddaada inay ku daraan walxo xiisa leh sida kolajyada iyo sawirada.
Qalabka fiidiyowga. Barnaamijyadani waxay sare u qaadaan sida summadaadu u qabato, u naqshadayso, oo u tafatirto fiidyaha.
Ka qayb qaadashada dhagaystayaasha, falanqaynta, iyo xogta. Isticmaal abka Instagram si aad ula socoto sida sumaddaadu ula falgalayso dhagaystayaashaada oo aad ula socoto waxqabadkaaga macluumaadka.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo wanaagsan oo loogu talagalay Sheekooyinka Instagram sidoo kale. Laakiin waxaan wax ka qabanaa kuwa ku jira boosteejo blog gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada ugu fiican ee Sheekooyinka Instagram.
Bonus: 14 Hacks-Waqti-Khidmad ah oo loogu talagalay Isticmaalayaasha Awoodda Instagram. Hel liiska dariiqyada sirta ah ee Hootsuite kooxda warbaahinta bulshada ee u gaarka ah ayaa adeegsato si ay u abuurto wax suulka joojinaya.
Barnaamijyada tafatirka Instagram
1. VSCO (iOS iyo Android)
Waa maxay sababta ay tahay inaad isku daydo:
Xigasho: VSCO oo ku taal dukaanka Apple
VSCO waa mid ka mid ah abka tafatirka sawirka asalka ah uguna caansan. Dhab ahaantii, aad ayay caan u tahay in in ka badan 200 milyan oo qoraallada Instagram ah ay muujiyaan hashtag #VSCO.
Waxaa jira 10 filtarrada hore loo diyaariyey oo bilaash ah oo ka dhigaya sawirradaada taleefoonka lagu duubay inay u muuqdaan sidii iyagoo filim lagu qabtay. Waxa kale oo jira qalabyo tafatir sawireed oo kala duwan oo diyaar ah si ay gacan uga geystaan ​​sare u qaadida tayada sawirkaaga, sida isbarbardhiga iyo saturation si kor loogu qaado sawiradaada, hadhuudh ku daraya muuqaal sawirada, iyo dalagga iyo agabka qallafsan oo beddela aragtida sawiradaada.
In ka badan 200 filtarrada hore loo dejiyay iyo agabka tafatirka sawir-qaadista ee horumarsan, ka cusboonaysii nooca bilaashka ah ee abka Instagram-ka si aad xubin uga noqoto VSCO.
Qoraal ay wadaageen VSCO (@vsco)
2. Tafatiraha Sawirka ee Avatan (iOS iyo Android)
Xigasho: Tafatiraha Sawirka Avatan ee Dukaanka Apple
Sidoo kale bixinta saamaynta iyo filtarrada si ay u dul dhigaan sawirkaagii asalka ahaa, Avatan Photo Editor ayaa kuu fududaynaysa in aad dib u taabato sawirada oo aad u abuurto saamayntaada habaysan ee sawirada. Nooca aasaasiga ah ee abka tafatirka sawirku waa bilaash, in kasta oo ay jirto ikhtiyaarka sifooyin dheeri ah ama qalab horumarsan adoo wax ku soo iibsanaya gudaha abka.
3. Snapseed (iOS iyo Android)
Xigasho: Snapseed on App Store
Codsigan wax lagu tafatiro ee Instagram-ka, waxaad ka shaqayn kartaa labada faylasha JPG iyo RAW taas oo ka dhigaysa qalab awood u leh sawir qaadayaasha xirfadlayaasha ah.
Marka laga soo tago shaandhaynta sawiradaada iyadoo la isticmaalayo presets-keeda, waxaad samayn kartaa hawlo culus oo tafatir sawireed gudaha Snapseed. Waxaa jira 29 qalab iyo astaamo, kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho sawirrada adoo ka saaraya walxaha (ama xitaa dadka) sawirka, hagaajiso joomatari dhismayaasha, isticmaal qaloocyada si aad u xakamayso iftiinka sawirkaaga, oo aad kor ugu qaaddo sawirrada si sax ah oo cajiib ah.
Qoraal uu wadaagay Stefan Berger (@alpaparozzi)
4. Adobe Lightroom Photo Editor (iOS iyo Android)
Xigasho: Adobe Lightroom ee App Store
Alaabooyinka Adobe waxa ay caan ku yihiin awoodooda tafatirka sawireed ee xoogga badan, iyo abka Adobe Lightroom Photo Editor ma aha mid ka reeban. Qabo oo tafatir sawirada cayriin adigoo isticmaalaya qalabka wax lagu tafatiro ee abka oo kor u qaad sawirada tayada xirfada leh adiga oo hagaajinaya midabkooda, dheregkooda, soo-gaadhistooda, hadhkooda iyo in ka badan.
Isku day filtarrada hore loo dejiyay, ka hel wax ka beddelka isticmaaleyaasha kale ee Lightroom ay sameeyeen iyagoo isticmaalaya qaybteeda Discover. Waxna ka baro casharrada is-dhexgalka leh si aad xirfaddaada tafatirka sawir uga qaadatid heer sare.
Qoraal uu wadaagay Adobe Photoshop Lightroom (@lightroom)
5. Sheeko Midabeed (iOS iyo Android)
Xigasho: Sheeko Midabeed Google Play
App-kan tafatirka sawirku waxa uu ku saabsan yahay samaynta midabada sawiradaada soo booda. Waxa jira 20 qalab oo wax tafatir oo bilaash ah, iyo sidoo kale filtarrada, saamaynta iyo horu-habaynta ay sameeyeen sawir qaadayaal iyo saamayn-yaqaanno. Waxa kale oo jira qaar ka mid ah aaladaha tafatirka horumarsan, iyo qalabkeeda qorshaynta shabakadda ee Instagram waxay kaa caawinaysaa inaad hubiso in calaamadda Instagram-ka calaamaddaadu u muuqato mid midaysan oo isku xidhan.
Qoraal uu wadaagay Sheeko Midab ah (@acolorstory)
Barnaamijyada qaabeynta Instagram
6. Instgram Grid Hootsuite dhexgalka
Isha: Hootsuite tusaha app
Abuur shabakad ilaa sagaal sawir oo ku daabac akoonkaaga Instagram si toos ah dashboardkaaga Hootsuite. Waxaad wakhti hore u samayn kartaa shabakadahaaga, oo aad daabaci kartaa marka dhagaystayaashaadu ay ugu firfircoon yihiin Instagram-ka.
Fiiro gaar ah: Grid Instagram hadda wuxuu ku shaqeeyaa oo keliya akoonnada Instagram-ka gaarka ah. Xisaabaadka ganacsiga lama taageero wakhtigan.
7. Layout From Instagram (iOS iyo Android)
Xigasho: Layout From Instagram on App Store
U samee kolajyada si fudud adiga oo isticmaalaya abkan Instagram-ka ee bilaashka ah, adiga oo ururinaya ilaa sagaal sawir oo kala duwan. Sawirro ka soo qaado maktabadaada ama toog intaad isticmaaleyso abka goob sawireed ku dhex dhisan. Layoout waxa ay sahlaysaa in la abuuro habab kala duwan oo isku xidhka, isku xidhka shaandhada iyo ku dar walxaha kale ee la shaqsiyeeyay, oo la wadaago Instagram.
8. Qalabka Naqshadeynta (iOS)
Xigasho: Qalabka Naqshadeynta ee Dukaanka App-ka
App-kan Instragram waxa uu ka yimi kuwa sameeyay Sheekada Midabka. U isticmaal si aad u shakhsiyayso oo aad u habayso waxa ku jira quudkaaga Instagram adiga oo ku dhejinaya dhejisyada, xarfaha, nashqadaynta iyo sawiradaada. Appku waxa uu ka kooban yahay in ka badan 60 xarfo oo kala duwan, in ka badan 200 oo qaab-qaabayn ah iyo in ka badan 200 oo naqshadood oo kala duwan. Iyo burushka dhabta ah iyo asalka kala duwan, sida biraha, marmarka iyo xadhkaha, waxay ku dari doonaan muuqaal iyo qoto dheer sawiradaada.
Qoraal uu wadaagay Qalabka Naqshadeynta (@adesignkit)
9. AppForType (iOS iyo Android)
Xigasho: AppForType ee App Store
Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada Instagram-ka ugu fiican ee jecel qoraal-qorista. Sidoo kale bixinta nakhshado, fiimyo iyo qaabab isku dubarid, AppForType waxay leedahay 60 farood oo kala doorasho ah oo lagu dul saaro sawirka astaantaada. Waxa run ahaantii ka dhigaya abka Instagram-ka mid soo muuqda ayaa ah sida aad sawir uga qaadi karto far qoraaleedkaaga oo aad ugu shubi karto abka.
Qoraal uu wadaagay AppForType (@appfortype_world)
Isha: Grid and Square Maker ee Google Play
Grid iyo Square Maker waxay u rogi doonaan sawir kasta shabakad Instagram, si isku mid ah u kala qaybinaysa sawirkaas sawirro labajibbaaran oo badan iyadoo la ilaalinayo xallin sare. Tan waxaa laga yaabaa inay isticmaasho summadaada si ay u abuurto rajo ku dhow ogeysiis weyn.
Sidoo kale ahaanshaha sawir-sameeyaha khadka, Grid iyo Sameeyaha Square sidoo kale waxay u beddelaan sawirro sawirro muuqaal ah iyo sawirro dalagga oo noqda afargeeska ugu habboon ee ku habboon qaabka Instagram.
Barnaamijyada tafatirka fiidiyowga ee Instagram
11. Boomerang ka Instagram (iOS iyo Android)
Xigasho: Boomerang ka Instagram on App Store
Boomerang waxa laga yaabaa inuu noqdo abka Instagram-ka ugu fudud uguna fudud Samee fiidiyowyo yaryar adoo furaya abka bilaashka ah oo riixaya hal badhan. Waa kaas!
Boomerang wuxuu qaadaa 10 sawir oo dilaac ah ka dibna isku xiraya iyaga, taas oo keentay muuqaal gaaban oo u eg GIF. Waxaad isticmaali kartaa kamaradaha hore ama gadaal si aad u abuurto muuqaal gaaban oo madadaalo leh. Gunno: tafatir looma baahna.
12. Hyperlapse ka Instagram (iOS)
Xigasho: Hyperlapse from Instagram on App Store
Barnaamijkan bilaashka ah ee Instagram wuxuu ka caawiyaa sumaddaada inay qabato muuqaal tayo leh oo waqti dhiman ah, adoon sidin qalabka sawir qaadista. Qabo muqaal adiga oo haya taleefankaaga, sida appku u xasilinayo fiidyaha la qabtay. Kadib, u wadaag Instagram.
Waxa kale oo aad ku dadajin kartaa fiidyaha ilaa 12 jeer xawaarihii asalka ahaa, adiga oo abuuraya saamayn xiiso leh iyo hab soo jiidasho leh oo lagu eego waxa ku jira fiidyowga oo si tartiib tartiib ah loo qabtay wakhti ka dib.
Qoraal uu wadaagay Brian | Safarrada Waqti-dhaafka ah (@timelapse_travels)
13. InShot - Tafatiraha Fiidiyowga (iOS iyo Android)
Xigasho: InShot on App Store
Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada Instagram ugu fiican ee loogu talagalay tafatirka fiidyaha, badanaa sababtoo ah waa mid dhamaystiran. Waxaad jari kartaa, gooyn kartaa, kala qaybin kartaa, ku milmi kartaa, oo jar kartaa fiidiyooga. Way fududahay in la hagaajiyo goobaha sida dhalaalka iyo saturation. Ku darista muusiga fiidiyowga waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee InShot.
Intaa waxaa dheer, app-kani wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah Instagram-ka, sida samaynta square-ga fiidiyowga ee soo bandhigida Instagram.
Qoraal uu wadaagay InShot Video Editor (@inshot.app)
14. Go Pro (iOS iyo Android)
Xigasho: GoPro ee App Store
Haddii aad ku toogto muuqaal muuqaal ah oo bannaanka ah Instagram-ka adiga oo isticmaalaya kamarad GoPro, abka GoPro ayaa noloshaada u fududayn doona. Markaad qaadayso muqaalada, isticmaal teleefankaaga si aad u hagaajiso muuqaalada ama habaynta wakhtigu oo aad u hesho horudhac cad oo tallaalkaaga ah. Marka fiidyahaaga la duubo, samee tafatir - sida qaboojinta fiimyada aad jeceshahay, beddelka filimada ama ku ciyaarista xawaare, aragti iyo midab - isla markiiba abka GoPro.
Qoraal uu wadaagay GoPro (@gopro)
15. Magisto Video Editor (iOS iyo Android)
Xigasho: Magisto Video Editor on App Store
App-kan Instragram waa qalab muuqaal ah oo ku shaqeeya sirdoon macmal ah. Si fudud, appku wuxuu isticmaalaa AI si uu u helo qaybaha ugu fiican, isha ugu badan ee muuqaalkaaga si uu u abuuro muuqaal ku qancinaya daawadayaasha. Waxa kale oo ay isticmaashaa algorithmkeeda si ay u dhexgeliso tafatirrada, saamaynta iyo kala-guurka si ay clipkaaga u qaado heerka xiga.
Qoraal uu wadaagay Magisto (@magistoapp)
Barnaamijyada falanqaynta Instagram
16. Hootsuite mobile app (iOS iyo Android)
Codka Hootsuite wuxuu u oggolaanayaa summada inay la socdaan waxqabadkooda shabakad kasta oo bulsheed, oo ay ku jiraan Instagram. App-ka Hootsuite waxaad ku ballansan kartaa qoraallada Instagram si aad hadhow u daabacdo, xitaa haddii aadan joogi karin miiskaaga. Sidan, waxaad had iyo jeer dhejinaysaa macluumaadka wakhtiga ugu fiican si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada oo aad u buuxiso jadwalka macluumaadkaaga warbaahinta bulshada. Hootsuite waxa kale oo ay sahlaysaa in lala socdo waxa ku jira Instagram-ka tartamayaashaada iyo la socodka hashtagyada.
Sidoo kale, la soco falanqaynta Instagram adoo isticmaalaya Hootsuite's function Analytics Waxaa dheer, waxaad abuuri kartaa warbixinnada falanqaynta oo waxaad la wadaagi kartaa xogta gaarka ah ee hadafyada astaantaada shirkadda.
Faahfaahin dheeraad ah ka hel falanqaynta Hootsuite ee Instagram halkan:
17. Aragtida Panoramiq
U isticmaal abkan Hootsuite si aad ugu qaadatid falanqaynta Instagram-kaaga heer sare. Falanqaynta Panoramiq ee Synaptive waxay ku siinaysaa falanqayn faahfaahsan oo ku saabsan akoonkaaga Instagram, oo ay ku jiraan xogta raacayaasha, muuqaalada, taageerayaasha cusub, aragtida astaanta, iyo xidhmooyinka isku xidhka.
Oo haddii shirkaddaadu leedahay in ka badan hal akoon oo Instagram ah, app-kani wuxuu la socon karaa falanqaynta laba akoon. La wadaag natiijooyinka abka uu ururiyay adigoo dhoofinaya warbixinahaaga falanqaynta sida xaashiyaha ama faylka PDF.
18. Amarka Instagram (iOS)
Xigasho: Command for Instagram on App Store
Taliska waxa uu bixiyaa tiro badan oo cabbirro gaar ah oo waxa uu la wadaagaa astaantaada xisaabteeda ugu muhiimsan maalin kasta. Waxa kale oo ay soo saartaa kaadhka warbixinta kaas oo ka qiimeeya wax kasta laga bilaabo kuwa raacsan ilaa inta jeer ee boostadaada. Waxa kale oo aad heli kartaa hashtag iyo qoraal qoraal ah, taageero qoraal qoraal ah, oo aad ka caawiso helida hashtagyada ugu fiican ee macluumaadkaaga.
19. Trending Hashtags by StatStory (iOS iyo Android)
Xigasho: Hashtags Trending by StatStory on App Store
Ku darista hashtags qoraaladaada Instagram waa hab fiican oo lagu kordhiyo ka qaybgalka dhagaystayaasha. Barnaamijkan Instagram wuxuu taageeraa xeeladda hashtag-ga summadaada isagoo kaa caawinaya inaad ku darto hashtagyada caanka ah. Waxa kale oo ay isticmaashaa algorithm si ay u hesho hashtag ku habboon summadaada waxayna ku talinaysaa isku dhafka hashtagooyinka caanka ah iyo kuwa aan caanka ahayn si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto dhegeysteyaal ballaadhan.
20. Nadiifi (iOS)
Xigasho: Ku nadiifi Store Store
Haddii aad aragto faallooyin badan oo spam ah ama aad rabto inaad nadiifiso xisaabaadka Instagram-ka ee astaantaadu la falgasho, tani waa mid ka mid ah barnaamijyada Instagram ugu fiican si aad u nadiifiso liiska raacayaasha oo aad u yareyso faallooyinkaas.
Hal taabo, abkani waxa uu si weyn u nadiifin doonaa liiskaaga raacsan, xisaabaadka bot-ka oo badan ama kuwa aan firfircoonayn, bulk tirtiri doona waxyaabaha nuqul ka mid ah, bulk ka duwan iyo bulk like posts.
Maamul joogitaankaaga Instagram oo ay weheliso kanaaladaada kale ee bulshada oo wakhti badbaadi adigoo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard, waxaad ka jadwalaysan kartaa oo daabici kartaa qoraallada, ka qaybgeli kartaa dhagaystayaasha, oo waxaad cabbiri kartaa waxqabadka. Isku day bilaash maanta.
Si fudud u abuur, falanqayn, iyo jadwalka Instagram qoraalada iyo Sheekooyinka oo leh Hootsuite. Waqti badbaadi oo natiijooyin hel.
Qiimaha Caymiska Ganacsiga ee Bilaabayaasha: Waa imisa? (2021)
Tilmaamaha wax iibsiga cusub ee Bing ayaa xooga saaraya isbarbardhigga wax iibsiga